မွေးနေ့ရှင်ခရစ်တော် – အရိုးမား မွနျမာခရဈယာနျစာပေ
6Dec 20126Jan 2014
ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်ခြင်း၊ နိမိတ်ပြုခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသော အချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ သူတို့ဟောသော အကြောင်းအရာ များ ကို ကြားသောသူ အား အမှန်တကယ် ဖြစ်မည် ဟု ထင်ယောင် ပြီး စိတ်တွင် စွဲနေအောင် ဟောတတ်၊ ပြောတတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အသေအချာ ပြန်လေ့လာကြည့် လျှင် လက်တွေ့ ဖြစ်မလာဘဲ အမှားများသာ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် ဟောသော ဟောကိန်း ၂ ခုသည် အလွန်ကောင်းသော ဥပမာ သာဓက များဖြစ်သည်။ အေပီ သတင်းဌါန သည် Jane Doherty ဆိုသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ ဟောကိန်း တစ်ခုကို Jan 4, 2007 နေ့တွင် ၄င်း၏ သတင်း များတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို အမျိုးသမီးက ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် ၄င်း၏ ဟောကိန်းတွင် သရုပ်ဆောင်မင်းသား Brad Pitt နှင့် မင်းသမီး Angelina Jolie တို့သည် ၂၀၀၇ နှစ်ကုန်သည်အထိ အကြင်လင် မယား အဖြစ် မြဲမြံစွာ ရှိနေဦးမည် ဟု ဟောခဲ့သည့် အချက်မှာ မှန်ကန်သော်လည်း၊ နယူးယောက် မြို့တော်ဝန် Rudi Gulianni သည် ရီပတ်ဘလီကန် ပါတီ ၏ သမတ လောင်းအဖြစ် အရွေးခံရမည် ဟု ၄င်း Obama သည် ၂၀၀၇ အကုန်တွင် သမတ ယှဉ်ပြိုင်သည့် ပြိုင်ပွဲမှ နှုတ်ထွက်သွားမည် ဟူ၍၄င်း မှားယွင်းစွာ ဟောခဲ့၊ ပြောခဲ့သည်။ သူမ ဟောခဲ့သည့် အချက်များကို (http://abclocal.go.com/wls/story?section=websites&id=4906023 တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
နောက်တစ်ယောက်မှာ Sylvia Brown ဆိုသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး Montel Williams TV show တွင် အမြဲတမ်း ပါဝင်လေ့ ရှိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Montel William TV အစီအစဉ်၏ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် သူမ၏ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွက် ကြိုတင်ဟောကိန်း အစီအစဉ်ကို လွှင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း အလွန်ကြီးသော ဆူနာမီ တစ်ခု က နယူးယောက် ကို ရိုက်ခတ်မည်၊ မက္ကစီကို နိုင်ငံတွင် မီးတောင်ကြီး တစ်ခု ပေါက်ကွဲမည်၊ အကြမ်းဖက် သမားများက ကုန်တင်ကား၊ မီးရထားများကို အသုံးပြုပြီး အမေရိကား ကို တိုက်ခတ်မည် စသဖြင့် အချက်ပေါင်း ၁၃ ချက် ကို ဟောခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။ သူမသည် အနာဂတ် ကို ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ် တတ်သော သူများတွင် အလွန်မှန်ကန်သည် ဟု နာမည်ကြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူမဟောသည့် အချက်များ အားလုံး တစ်ခုမျှ ဖြစ်မလာခဲ့ပါ။
ထိုသို့ ဟောကိန်းထုတ် တတ်သူ ဆရာကြီးများအထဲတွင် လူသိအများဆုံးသော ဆရာကြီးတစ်ပါးမှာ Jean Dixon ဆိုသူ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဟောခဲ့သည့် အချက်တစ်ချက်တွင် ၁၉၆၀ ခုနှစ် သမတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသူ သည် သူ၏ သမတ သက်တမ်းအတွင်းတွင် ပင်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ကို ခံရမည်ဟု ဟောခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ပင် 1960 ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနိုင်ရရှိသူ J.F Kennedy လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသော်လည်း၊ သူမဟောခဲ့သည့် အချက်များကို အသေအချာ ပြန်ကြည့်မည် ဆိုလျှင် ၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် Richard Nixon အနိုင်ရရှိမည် ဟု မှားယွင်းစွာ ဟောခဲ့သည့် အချက်ကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ လူတော်တော်များများသည် Ms. Dixon အား အနာဂတ် ကို ကြိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိသူ၊ ပရောဖက် အမျိုးသမီး တစ်ဦးအဖြစ် ခံယူ၊ လေးစား ခဲ့ကြသည်။ သူမကွယ်လွန်သည့် ၁၉၉၇ ခုနှစ် အထိ နောင်နှစ် အတွက် ကြိုတင်ဟောကိန်းများကို နှစ်တိုင်း မှန်မှန် ဟောလေ့ ရှိသည်။ သူမ ကြိုတင် ဟောသည့် အချက် အချို့သည် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသော်လည်း၊ ပို၍ များသော အချက်များသည် အမှားများသာဖြစ်သည်။ ဥပမာ သူမဟောသော အချက်များတွင် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် တတိယ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်မည် ဟူ၍၄င်း၊ ဆိုဗီယက် သည် လကမ္ဘာပေါ် သို့ လူသားများကိုစေလွှတ်သည့် ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်မည် ဟူ၍၄င်း၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် George Bush (senior) က ပြိုင်ဖက် Bill Clinton ကို အနိုင်ရှိမည် ဟူ၍၄င်း၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် သရုပ်ဆောင် Alec Baldwin အကြီးအကျယ် မနာမကျန်းဖြစ်မည် ဟူ၍၄င်း၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တွင် လေယဉ်ပျံ ပျက်ကျခြင်း ဖြစ်မည်ဟူ၍၄င်း ဟောကြားခဲ့သည့် အချက်များသည် လုံးဝ အမှားအယွင်းများသာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သူမကို ၂၀ ရာစု ၏ အကောင်းဆုံးသော ပရောဖက် အဖြစ် လူအများစုက ခံယူထားသည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် ပရောဖက်များအကြောင်း ကြိန်ဖန်များစွာ တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင် ဖော်ပြသော အရာများကို
ဟောခဲ့ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုပရောဖက်များ၏ ကြိုတင် နိမိတ်များကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမှန်တကယ် တည်ရှိခြင်း၊ တန်ခိုးကြီးခြင်း အရာများကို မျက်ဝါးထင်ထင် သိခဲ့၊ နားလည်ခဲ့၊ သဘောပေါက်ခဲ့ ကြရသည်။ ထိုအရာများထဲမှ သခင်ယေရှု ၏ မွေးဖွါးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ဟောကိန်း၊ နိမိတ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အရာများကိုအနည်းငယ် လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ငါ့အမှုအရာတို့သည် ပြီးစီးခြင်း သို့ရောက်ကြပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ (လု ၂၂း၃၇) အင်္ဂလိပ် ကျမ်းစာတွင်
“Everything written about me by the prophets will come true.” (New Living Translation) ဟု ဖော်ပြထားသည်။ နားလည်လွယ်သည့် ခေတ်သစ် စာအားဖြင့် ရေးရမည်ဆိုလျှင် “ငါ့အကြောင်းကို ကြိုတင် ပရော ပြု ဟောထားခဲ့သည့် အရာအားလုံး အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်လာမည်” ဟု ဆိုနိုင်သည်။
သခင်ယေရှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရသည့် အချက်နှစ်ချက်မှာ – (၁) ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းစာ ထဲတွင် သခင်ယေရှု မမွေးခင် ကတည်းက သူ့အကြောင်း ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ် ခဲ့သည့် အရာ အားလုံး တစ်လုံးမကျန် သူ့ အပေါ်တွင် တိကျ မှန်ကန်စွာ ဖြစ်ပျက် ခဲ့သည် ဆိုသည့် အချက်နှင့် (၂) သူသည် ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းစာ ထဲမှ ပရောဖက်ပြုချက် များကို ဖြည့်ဆည်း ရန် အတွက် ကြွလာတော်မူသည် ဆိုသည့် အချက် များဖြစ်သည်။
ယနေ့ သိပ္ပံ ပညာရှင်များ နှင့် ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်များ၏ လေ့လာချက်များမှ သိရှိရသည်မှာ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းစာအုပ် များသည် ခရစ်တော် မမွေးဖွါးခင် ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာ ကတည်းက ရေးသားခဲ့သော ပေ၊ ပုရပိုဒ် ကျောက်စာ များဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာကို မယုံကြည်သူ ဖြစ်စေ ဤ အချက်ကို မည်သို့မျှ မငြင်းပယ် နိုင်ပါ။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းစာအုပ် များသည် ခရစ်တော် မမွေးဖွါးခင် ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာ ကတည်းက ရှိနှင့် ပြီဆိုသည့် အချက်ကို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် များမဟုတ်ဘဲ သိပ္ပံပညာရှင်နှင့် ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်များက အခိုင်အမာ သက်သေ ထူထားသည်။ ထို့ကြောင့် ထို ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းစာထဲမှ ယေရှုခရစ်တော် နှင့် ပတ်သက်သော ကြိုတင်ဟောကိန်းများ၊ နိမိတ်များကို ပြင်ဆင်ထားပါသည်၊ ဖြည့်စွက်ထားပါသည် ဟု လီဆယ်ပြော ဆို၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှု နှင့် ပတ်သက်၍ သူ မမွေးခင် နှစ်ရာပေါင်း များစွာ ကရှိနှင့် ပြီးသော ပရောဖက်ပြုချက်များသည် အလွန်အရေးကြီးလှပေသည်။
သခင်ယေရှုအကြောင်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်း တွင် ပရောဖက်ပြုခဲ့ခြင်း
ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းစာတွင် သခင်ယေရှု အကြောင်း ခိုင်မာ တိကျစွာ ပရောဖက် ပြု ခဲ့သည့် အချက် ပေါင်း ၆၀ ကျော်ခန့်ကို တွေ့ရသည်။ ထို အချက် အားလုံးသည် သခင်ယေရှု ၏ သက်တော်စဉ် ဘ၀တွင် တိတိကျကျ မှန်ကန်ခဲ့သည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ထို အချက် အားလုံးမှ အချို့သော အချက်များကိုလေ့လာကြည့် မည်ဆိုလျှင် –
၁။ သခင်ယေရှု မမွေးဖွါးခင် နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်ကရေးသားသော မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်း တွင် မေရှိယ (ခရစ်တော်) ကို ဗက်လင်မြို့တွင် မွေးဖွားမည်ဟု ရေးသားခြင်း –
“အိုဗက်လင်ဧဖရတ်မြို့၊ အစိုးရသော ယုဒမြို့တို့တွင် သင်သည် မြို့ငယ်မြို့ယုတ်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဣသရေလ အမျိုးကို အုပ်စိုးရသောသခင်သည် ငါ့အဘို့သင်၏အထဲမှာ ပေါ်ထွန်းလတံ့။ ထိုသခင်သည် ရှေးကပ်ကမ္ဘာမှစ၍ ပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်၏ ” (မိက္ခာ ၅း၂)
မိက္ခာကျမ်းတွင် နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်က ဟောခဲ့သည့် အတိုင်း သခင်ယေရှု ကို ဗက်လင် မြို့တွင် အမှန်တကယ် မွေးဖွားလာခဲ့သည်။
၂။ သခင်ယေရှု မမွေးဖွါးခင် နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်တွင် ပရောဖက် ဟေရှာယက မေရှိယ (ခရစ်တော်) ဖွါးမြင်ခြင်း မတိုင်ခင် ခရစ်တော်၏ ရှေ့ပြေး အရင်လာမည် ဟုရေးသားခဲ့သည်။
“တော၌ ဟစ်ကြော်သော သူ၏ အသံမှာ၊ ထာဝရဘုရား ကြွတော်မူရာ လမ်းကို ပြင်ကြလော့၊၊ ငါတို့ဘုရား သခင်၏ လမ်းခရီးတော်ကို လွင်ပြင်၌ ဖြောင့်စေကြလော့၊” (ဟေရှာ ၄၀း၃)
ခရစ်တော် မမွေးခင် နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်ကတည်းက ဟေရှာယ ကျမ်းစာအုပ်တွင် ရေးသားခဲ့သည့် အတိုင်း နှစ်ခြင်းဆရာ ယောဟန် သည် ခရစ်တော်၏ ရှေ့ပြေးအဖြစ် ကျမ်းစာတွင် မြင်တွေ့ခဲ့ကြရသည်။
၃။ မေရှိယသည် ယေရုရှလင် မြို့ထဲသို့ မြည်း ကိုစီးလျှက် ၀င်လာမည် ဟု ခရစ်တော် မမွေးခင် နှစ်ပေါင်း များစွာ ကတည်းက ဇခရိ အနာဂတ္တိကျမ်းတွင် ဟောခဲ့၊ ရေးသားခဲ့သည်။
“အိုဇိအုန်သတို့သမီး အလွန်ဝမ်းမြောက်လော့။ အိုယေရုရှလင်မြို့သတို့သမီး ကြွေးကြော်လော တရားသဖြင့် စီရင်၍၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသခင် သင်၏အရှင်မင်းကြီးသည် မြည်းမနှင့် မြည်းကလေးကို စီး၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့် သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုလော့။ “(ဇာခရိ ၉း၉)
ဇာခရိကျမ်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုတင် ဟောခဲ့သည့် အတိုင်း ခရစ်တော်သည် ယေရုရှလင် မြို့တွင်းသို့ မြည်းကလေး ကိုစီးလျက် သံလွင်ခက် တနင်္ဂနွေနေ့ (Palm Sunday) တွင် ၀င်လာသည် ကို တွေ့ခဲ့ကြရပြီ (မသဲ ၂၁း၁-၅)။
၄။ ခရစ်တော် မပေါ်ခင် နှစ် တစ်ထောင် ပတ်ဝန်းကျင် ခန့်က ရေးသားထားသော ဆာလံ ကျမ်းစာတွင် လည်း ခရစ်တော်ကို အရင်းနှီးဆုံး လူယုံ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် က သစ္စာဖောက် မည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
“အကယ်စင်စစ် ငါယုံ၍ ငါ့မုန့်ကို စားသောအဆွေ ခင်ပွန်းသည် ငါ့ကို ခြေနှင့်ကျောက်သတည်း “(ဆာ ၄၁း၉)။
အမှန်တကယ်ပင် ခရစ်တော်ကို သစ္စာဖောက် ပြီး ငွေအသပြာ ၃၀ နှင့် ရောင်းသော သူ သည် သူ၏ အရင်းနှီးဆုံး သော နောက်လိုက်တပည့် တမန်တော် ၁၂ ပါးအ၀င် ယုဒရှာကရုတ်ဖြစ်သည်။ (ယော ၁၃း၂၁-၃၁)
၅။ ဇာခရိ အနာဂတ္တိကျမ်းတွင် ခရစ်တော်ကို ငွေအသပြာ ၃၀ ဖြင့် သစ္စာဖောက် ခြင်းခံရမည် ဟု ရေးသားထားသည်ကို လည်း တွေ့ ရသည်။
“တဖန် ငါက၊ ငါရထိုက်သောအခကို ပေးအံ့သောငှါ၊ သင်တို့သည် အလိုရှိလျှင်ပေးကြလော့။ အလိုမရှိလျှင်မပေးကြနှင့်ဟုဆိုသော်၊ သူတို့သည် ငါ့အားအခပေးအံ့သော ငှါ ငွေသုံးဆယ်ကိုချိန်ကြ၏ “(ဇာခရိ အနာဂတ္တိကျမ်း ၁၁း၁၂-၁၃)။
ရှင်မသဲ ၂၆း၁၅ ကို ဖတ်ကြည့်လျှင် ယုဒရှာကရုတ် သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးထံ သခင်ယေရှုအား ငွေအသပြာ ၃၀ နှင့် သစ္စာဖောက်သည်ကို တွေ့ရသည် “အကျွန်ုပ်သည် ယေရှုကိုကိုယ်တော်တို့လက်သို့အပ်လျှင် အဘယ်မျှလောက် ပေးပါမည်နည်းဟု လျှောက် သော်၊ ထိုသူတို့က ငွေအကျပ်သုံးဆယ်ပေးမည်ဟု ဝန်ခံကြ၏။”
၆။ တဖန် ဇာခရိ အနာဂတ္တိကျမ်းတွင် ပင် ထိုငွေ အသပြာ ၃၀ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသားထားသေးသည်။
“ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ထိုငွေကို အိုးထိန်းသမားရှေ့မှာ ပစ်ချကြလော့။ ငါ့ကိုအဘိုး ပျက်၍ ငွေများလှသည်တကားဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုငွေသုံးဆယ်ကိုငါယူ၍ ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်၌ အိုးထိန်းသမားရှေ့မှာ ပစ်ချ၏။” (ဇာခရိ အနာဂတ္တိကျမ်း ၁၁း၁၃)
ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်းကို ရေးသားပြီး နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ခန့်မျှ ကြာသောအခါ ယုဒရှာကရုတ် သည် သူ၏ ဆရာဖြစ်သူ သခင်ယေရှု အား ငွေအသပြာ ၃၀ နှင့် သစ္စာဖောက် ရောင်းချခဲ့သည်။ သို့သော် ပြန်နောင်တရ သဖြင့် ထိုငွေ အသပြာ ၃၀ ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းထံ ပြန်ယူလာပြီး၊ ပြုခဲ့သမျှ သင်ပုန်းချေ ရန် ကြိုးစားခဲ့ သေးသည်။ သို့သော် ယဇ်ပုရောဟိတ် မင်းကြီးက လက်ခံရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ယုဒရှာကရုတ် က ထိုငွေများကို အတင်း ဗိမ္မန်တော် တွင် ပစ်ချခဲ့ပြီး ထွက်သွားသည်။ ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ် များက ဤအသပြာ များသည် သွေးစွန်းသော ငွေအသပြာ များဖြစ်သော ကြောင့် ဘဏ္ဍာတော် တိုက်ထဲ ထဲ့ထားရန် မသင့်လျော် ဟု ဆိုကာ ထိုငွေဖြင့် အိုးထ်ိန်းသမား မြေအိုးလုပ်သူ ထံမှာ မြေကွက် တစ်ကွက်ဝယ်ယူကာ၊ ထိုမြေကွက်အား ဂျူး မဟုတ်သူ အခြား အမျုိုးသား များအတွက် သင်္ချိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည် ကို မသဲ ၂၇း၁-၁၀ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရ။ ပရောဖက်ဟေရှာယက ခရစ်တော် မေရှိယ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဟေရှာယ အနာဂတ္ဆိကျမ်း (၅၃း၇) တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြိုတင်ဟောထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ထိုသူသည် ညှင်းဆဲခြင်းနှင့် နှိမ့်ချခြင်းကိုခံ၍ နှုတ်ကို မဖွင့်ဘဲနေ၏၊၊ အသက်သတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွား သော သိုးငယ်ကဲ့သို့သူ့ကို ဆောင်သွား၍၊ သိုးသည် အမွေးညှပ်သော သူရှေ့မှာမမြည်ဘဲနေသကဲ့သို့၊ သူသည် နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏၊၊”
ဟေရှာယ ကြိုဟောခဲ့သည့် အတိုင်း သခင်ယေရှုကို ယဇ်ပုယောဟိတ် ကာယာဖ ရှေ့တွင် စစ်ဆေးမေးမြန်း သော အချိန်တွင် နှုတ်မဖွင့်ဘဲ နေသည်ကို (မသဲ ၂၆း၆၂-၆၃) တွင် တွေ့ရှိရသည်။ “ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ထ၍၊ သင်သည်တခွန်းမျှပြန်၍ မပြောသလော။ ဤသူတို့သည် အဘယ်သို့သက်သေခံသနည်းဟုဆိုလျှင်၊ ယေရှုသည် တိတ်ဆိတ်စွာ နေတော်မူ၏။”
၈။ ဆာလံ ကျမ်း ၂၂း၁၆ တွင် ခရစ်တော်မေရှိယ ၏ လက် ခြေ တို့ကို သံနှင့် ထိုးရိုက် လိမ့်မည်ဟု အောက်ပါ အတိုင်း ရေးသားထားသည်။
“ခွေးတို့သည် အကျွန်ုပ်ကို ဝိုင်းလျက် စုဝေးသောလူဆိုးတို့သည် ဝန်းရံလျက်နေ၍ အကျွန်ုပ်၏ လက်ခြေတို့ကိုထိုးဖောက်ကြပါပြီ၊၊”
အမှန်တကယ်ပင် ကိုယ်တော်ကို ကားတိုင်တင် သတ်သည့် အချိန်တွင် လက်နှင့် ခြေဖ၀ါး တို့ကို သံနှင့် ရိုက် ခဲ့ကြသည်။
ခရစ်တော် မမွေးဖွါးခင် နှစ်ပေါင်း ရာနှင့်ချီပြီး ဝေးကွာ ခဲ့သည့် အချိန်တွင် ပြုခဲ့သော ဤ ပရောဖက် ပြုချက်များ တိကျမှန်ကန်စွာ ခရစ်တော် အပေါ်ဖြစ်ပျက် လာသည်မှာ တိုက်ဆိုင်မှု များမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင် ဤ အချက် ရှစ်ချက် ထက် မကများစွာသော ပရောဖက်ပြုချက်များ ရှိသေးသည်။ ထိုအရာ များအားလုံးသည်လည်း ခရစ်တော် မမွေးဖွါးခင် ရာစုနှစ် များစွာ ကတည်းက ဟောခဲ့ ပြောခဲ့သော အရာများဖြစ်သော်လည်း ခရစ်တော် ယေရှု ၏ ဘ၀တွင် လုံးဝ တိကျ မှန်ကန်စွာ ဖြစ်ပျက် ခဲ့သည်။ အောက်ပါ ပရောဖက်ပြု ချက်များ ကို ဆက်လက်လေ့လာ ကြည့်ကြပါစို့
ခရစ်တော်အား ကွပ်မျက်ခြင်း အမှုကို ပြုလုပ်သူများက ၀တ်လုံတော်ကို အလောင်းအစားပြု ပြီးယူသွားကြမည် ဟု ဆာလံ ၂၂း၁၈ တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ “အကျွန်ုပ် အဝတ်ကို အချင်းချင်းဝေဖန်၍ အကျွန်ုပ်အင်္ကျီကို စာရေးတံချကြပါ၏၊၊” မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရာတွင် စာရေးတံချ သည်ဟု ဘာသာပြန်သည်။ အင်္ဂလိပ် ကျမ်းစာအုပ်တွင် “They took my clothes and gambled for them.” ဟု ရေးသားထားသည်။
ခရစ်တော်သည် ဂျူး လူမျိုး မဟုတ်သော အခြားတပါး အမျိုးသားများ အတွက် အလင်းဖြစ်သည်ဟု ဟေရှာယ ၉း၁-၂ တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ “တပါးအမျိုးသားနေရာ၊ ဂါလိလဲပြည်ကို ဂုဏ်အသရေနှင့် ပြည့်စုံစေတော်မူ၏၊၊ မှောင်မိုက်ထဲမှာ သွားလာသော လူများတို့သည် ကြီးစွာသော အလင်းကိုမြင်ရ၍၊ သေမင်း၏နိုင်ငံအရိပ်တွင် ရှိနေသော သူတို့၌ အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏၊၊” မှန်ပါသည်…သခင်ယေရှု အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း တရားသည် ဂျူးမဟုတ်သော အခြားတပါး အမျိုးသား များဖြစ်သည့် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ခံစားခွင့် ရရှိခြင်းဖြင့် လောက အလင်းဟု ပင် တင်စားထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၉း၁၀ ကိုကြည့်လျှင် “ရှိလောမရောက်မှီတိုင်အောင်၊ ရာဇလှံတံသည် ယုဒထံမှ ၄င်း၊ မင်းအာဏာသည် သူ၏အမျိုးအနွှယ်ထံမှ၎င်း မရွေ့ရ။ ရှိလော၌ လူမျိုးတို့သည် ဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။” အင်္ဂလိပ် ကျမ်းစာတွင် ““The scepter shall not depart from Judah, Nor the ruler’s staff from between his feet, Until Shiloh comes, And to him shall be the obedience of the peoples.” ဟုဘာသာပြန်ထားသည်။ ယုဒ တိုင်းပြည်တွင် ရှင်ဘုရင်များ ရှိနေသေးသည့် အချိန်တွင် မေရှိယ ရောက်လာမည့် အကြောင်း ကမ္ဘာဦး ကျမ်းရေးသားခဲ့ စဉ်ကတည်းက ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
မေရှိယ ဖြစ်သော သခင်ယေရှု အကြောင်း သူ ကြွမလာခင်နှစ် ရာပေါင်း ထောင်ပေါင်း များစွာ ကတည်းက ကြိုတင်ရေးခဲ့၊ ဟောခဲ့၊ ပရောဖက်ပြုချက် များ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက် ခဲ့ကြောင်းကို ဆက်လက် လေ့လာ ရှာဖွေမည်ဆိုလျှင် အမြောက်အများရှိသေးသည်။ ဤ အရာများအားလုံး တညီတညွတ်တည်း တိုက်ဆိုင် မှုဖြစ်သည် ဟု ဆိုနိုင်ပါမည်လော။ ဤ အချက်အလက် အားလုံး သည် တိုက်ဆိုင်မှု များသာ ဖြစ်သည် ဟု ခေါင်းမာစွာ ခံယူသောသူ သည် ခရစ်တော်ကို ဘယ်လိုနည်း နှင့် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မိုက်မဲစွာ မျက်စိမှိတ် ဆန့်ကျင်မည် ဟု ခံယူထားသူ သာဖြစ်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
ခရစ်တော်မမွေးခင် နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက ရေးသားခဲ့သော ရေးသားချက်၊ ဟောချက်၊ ဗျာဒိတ် ပရောဖက်ပြုချက်များ အားလုံး ခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ်ဘ၀ တွင် တသဝေမတိမ်း ဖြစ်ပျက် လာခဲ့သည် မှာ တစ်စုံတစ်ဦးက ထိုသူ အားလုံးတို့၏ စိတ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို တစ်စုံတစ်ဦး မှာ တန်ခိုးအနန္တကြီးသော၊ တပါးတည်းသော ဘုရားသခင်သာဖြစ်သည်။
ခရစ်တော် မေရှိယ လောက ကိုဆင်းကြွလာရခြင်းဟာလည်း အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ လူသားများအားလုံး ညီတူညီမျှ တစ်ယောက် မကျန် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်။ အပြစ်ရဲ့ အခ အဖြစ် ထာဝရ သေခြင်း ဆိုသော အရပ်ဒေသကို ဦးတည်သွားနေကြပါသည်။ ထာဝရ သေခြင်း ကို ဦးတည်သွားနေကြတဲ့ ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ အားလုံး ကို ကယ်တင် ဖို့ရန် လမ်းတစ်လမ်းထဲသာ ရှိပါသည်။ ထိုလမ်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စားတစ်စုံ တစ်ယောက် ကိုယ်စား အသေခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူသားအားလုံး ကိုယ်စားအသေခံ ဖို့ လူသားထဲမှ လူသားတစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် ရဲ့ တန်ဖိုးအထားဆုံးဖြစ်တဲ့၊ အချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ယေရှုသခင်ကို ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံး ရဲ့ အပြစ်များကို ဆေးကြောဖို့ရန်၊ လူသားအားလုံးကိုယ်စား အသေခံဖို့ရန် ကြွဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့ကို ခရစ္စမတ်နေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ဆင်နွဲ ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အသိအမှတ်ပြုလျက် သားတော် ယေရှုသခင် ရဲ့ ကိုယ်စားအသေခံ ခြင်းကို လက်ခံယုံကြည်မယ် ဆိုရင် ထာဝငရဲ မီးအိုင်ကို ရှေးရှုသွားနေတဲ့ မိတ်ဆွေဟာ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ထာဝရ ပျော်ရွှင်ခြင်း ဆိုတဲ့ နိဗ္ဗန်ကို ရှေးရှုသွားနေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ မိတ်ဆွေကို ချစ်တယ်.. အပ္ပါယ် ငရဲသွားမှာကို မလိုလားဘူး…
ဘုရားသခင်ဟာ ယေရှုသခင်အားဖြင့် မိတ်ဆွေရဲ့ အပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်…
ယေရှုသခင်အားဖြင့် အပြစ်သားကျွန်တော်တို့အားလုံးကို ဖြောင့်မတ်သောသူ အဖြစ် ဘုရားက မှတ်ယူတယ်….
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ အားလုံး ၂၀၁၂ ရဲ့ ခရစ္စမတ် အခါ သမယ မှာ စိတ်ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ လျက် ခရစ်တော် မွေးဖွားခြင်း အကြောင်းရဲ့ မူရင်း အဓိက ရည်ရွယ်ချက် မှန်ကို ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း သတိရရင်း…….
၀န်ခံချက် – Joe La Rue ၏ The Fulfillment of Prophecy တရားဟောချက်ကို ကိုးကားထားပါသည်။
Previous Testimony and Praising God from U Kam
Next Are You Ready for Christmas
Pingback: မွေးနေ့ရှင်ခရစ်တော် « Calvary Burmese Church
Archives Select Month June 2019 April 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 November 2014 October 2014 September 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010